को हुन् रावत ? पहिलो वर्षको आइ .एस. सि .ए .जी भए उनी मात्र पास – Newssarokar
को हुन् रावत ? पहिलो वर्षको आइ .एस. सि .ए .जी भए उनी मात्र पास
न्यूज सरोकार । १३ पुष २०७८, मंगलवार ०६:१८
शेर बहादुर रावत अहिले चन्दनाथ माध्यमिक विधालय पहिलो वर्षको आइ .एस. सि .ए .जी छात्रवृति बाट उनी मात्र पास भएका छन् । ३९ जना विधार्थीमा छात्रवृति बाट उनि मात्र पास हुनु भएको छ । रावतको तिला गाउँपालिका ६ विकट बस्ती रिपीमा जन्म भएको हो । आमा बाचँु रावत र बुबा धनमल रावतको कोखबाट जन्मिएका रावत साइला सन्तान हुन । उनि सानै देखि मिहिनेती र लगनशिल विधाथीर्का रुपमा चिनीन्थे । उनले श्री महादेब आधारभुत विधालय रिपीमा प्रावि पास गरे ।
निमाबिको लागि गाउँमा विधालय नहुदा दुई घण्टा पैदल हिडेर देब लक्ष्मी आधारभुत विधालय सुडिमा निमावि शिक्षा हासिल गरे । विकट् बस्ती अनी न्युन आयस्रोत घरपरिवार भएका रावत पढ्न लेख्नमा अग्रसर थिए । उनि सानै देखि प्रथम हुदै माबि शिक्षा जनजागृति घोडेमा हासिल गर्नु भयो । जति पढ्न लेख्न जान दुख हुथ्यो उनि उतिकै मिहिनेती थिए । कक्षाका इमान्दार विधार्थी पनि हुन । तिन घण्टाको बाटो हिड्दै विधार्थी जिवन बिताउँदै आए ।
उनले एसइइ पास गरे लगातै कृषि जेटिय पढ्न सुरु गर्नु भयो । १८ महिने जेटिय सकायर जुम्ला सदरमुकाम खलंगा झर्नु भयो । उनलाई सधै पढ्नको लागि पैसाको अभाब हुन्थ्यो । उनले जुम्लाको चन्दननाथ नमुना माध्यमिक विधालयमा आइ .एस. सि .ए .जी फोम भर्नु भयो । उनले स्कलर सिपमा नाम निकालेर थप उर्जा मिल्यो । उनले पहिलो वर्षको परीक्षा मा प्रथम हासिल गर्नु भएको छ ।
उनी भन्छन् पढ्ने रहर त धेरै थियो तर घरमा न त आमा नत बाबा रोजगारी ,आजको बजारले एउटा बुढा आमा बाबा ले दिनरात उकाली ओराली गर्दै कमको पैसा ले पुग्दो रहेनछ,जेनतेन छात्रवृत्ति मा नाम निकाल्न सके । नत्र मेरो पढ्ने सपना मात्र हुन्थ्यो । उनिको उज्ज्वल भविष्यको लागि थप उर्जा मिलेको छ । फेसबुक ,मेसेन्जरे बधाई पाएका छन् ।
८६ वर्षकाे उमेरमा नागरिकता
१३ पुष २०७८, मंगलवार ०६:१८
मुगु । मुगुमा ८६ वर्षीया वृद्धाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुभएको छ । मुगुमकामारोङ्ग गाउँपालिका-३ की शिग्याल लामालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले नागरिकता प्रदान गर्नुभएको हो । लामो समय भारतमा बस्नुभएकी उहाँले नेपाल आएर नागरिकता लिनुभएको हो । नागरिकता लिएसँगै लामाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाउने हुनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्र […]
३० असार २०७८, बुधबार १७:४३
छोरी जन्मिएपछि परिवारै मिलेर हत्या, आमासहित ४ जना पक्राउ
२५ कार्तिक २०७८, बिहीबार २१:४३
कर्णालीको निमित्त उपकुलपतिमा डा.थापा लाई
१० पुष २०७८, शनिबार १९:४३
जनताको भावना बुझेर मात्र एमसिसी अघि बढ्छ : माधव नेपाल
५ आश्विन २०७८, मंगलवार १९:०६
कोभिडले थलिएको प्राविधिक शिक्षा
१३ श्रावण २०७८, बुधबार १८:००
घर नै बालबालिकाको पहिलो पाठशाला
१९ आश्विन २०७८, मंगलवार १७:०६
दशैँ लक्षित बजार अनुगमनकाे चटाराे